नागरिक आवाज | संविधानसभा चुनाव-२०७० :: स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि मोवाईल, न्यू मिडिया र रेडियो मार्फत नागरिक सहभागिता
Sat, Oct 21, 2017 | 12:23:04 NST
नागरिक आवाज IVR बाट
चुनावको दिन गाडी चलाउन नपाइने भएपनि माओवादीका नेता कार्यकर्ता गाडी नै लिएर हिँडिरहेका छन् । यसलाई कत्तिको उपयूक्त मानिन्छ ? के राजनीतिक दलले जे गर्दा नि हुन्छ ?
मतदाता नामावलीमा नाम भएका हरेक व्यक्तिलाई भोट हाल्ने हक छ । तर नेपालमा धेरै व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन् । पढाई र रोजगारीकै कारण देशमै पनि मतदाताहरु आफ्नो क्षेत्रमा छैनन् । के यसरी आधा व्यक्तिले मात्र भोट दिएर स्पष्ट प्रतिनिधिको छनोट होला त ?
दिपकराज ओझा, बैतडी, हाल काठमाडौं
यो संविधानसभाले हरेक वर्ग र जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने संविधान बनाउनुपर्छ । संविधानले नेपाललाई विभाजन गर्ने भन्दा पनि देशवासीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्छ । त्यहाँ जितेर जाने सभासदले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि देशको स्वार्थमा ध्यान दिनुपर्छ ।
मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको छ । तर सुर्खेतको लाटिकोईली गाविसमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले भने घरदैलो कार्यक्रम गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ । के यसो गर्नु संवैधानिक हो ?
योगेन्द्रबहादुर क्षेत्री, सुर्खेत
संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम र शंकास्पद वस्तु राखिरहेको अवस्थामा भोलि मतदान गर्न जांदा हामी नागरिकलाई केही हुने त होईन ? मतदान केन्द्रको गेट भित्र छिरेपछि त हामीलाई सुरक्षा होला तर आउंदा जांदा सुरक्षाको प्रत्याभूति कस्ले दिने ?
हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी
कसरी सहभागी हुने ?
उज्यालोको फेसबुक पेज 'www.facebook.com/ujyaalo' मा जानुहोस र चुनाव सम्बन्धि तपाईका बिचार, भनाई, फोटा र भिडियो म्यासेज मार्फत हामीलाई पठाउनुहोस् ।
उज्यालोको ट्वीटर हेण्डल @ujyaalo (www.twitter.com/ujyaalo) लाई मेन्सन गर्नुहोस । चुनाव सम्बन्धि ट्वीट गर्दा ह्यासट्याग #NepVote प्रयोग गर्नुहोस् ।
मोवाईलको म्यासेज बक्समा जानुहोस् 'Vote' टाईप गरि एक स्पेस दिनुहोस र आफ्ना बिचार लेखेर ५५६६ मा एसएमएस गर्नुहोस् ।
हरेक दिन बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म पैसा नलाग्ने फोन १६६००१ ५ ५५ ६६ मा फोन गर्नुहोस र आफ्ना कुरा आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गर्नुहोस् । उल्लेखित समय बाहेक अन्य बेला ०१ ५०००१९२ मा फोन गर्नुहोस् ।
तपाई उम्मेद्वार, पार्टी र चुनावका बारेमा आफुलाई भन्न मन लागेका कुरा फोटा, भिडियो हामीलाई ईमेल [email protected] मार्फत पठाउनुहोस् ।
योग्य नेता छानौं
आखिर ४ मंसिरमा संविधान सभाको चुनाव हुने भएकाले आशाको किरण देखेको छु । संघियता र राष्ट्र पुनर्संरचनाका कुरा पेचिला विषय हुन् । यसमा उग्रता, नतमस्तकता र मुर्खता काम लाग्दैन । त्यसैले वैद्धिक सुझबुझ भएका...
बलराम सुवेदी, नवरपरासी
वैद्यजीले जनताको लागि लड्ने पार्टी नेकपा माओवादी मात्र भन्नुहुन्छ . तर जनताले मताधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा भने बन्दको घोषणा गर्छन् . अनि मोटर साइकल चाँही प्रयोग गर्न दिएको छौं भनेका छन् । तर मोटरसाइकल चड्ने त धनी जनता मात्र हो, गरिब होइन नि ।
लोकेन्द्र भण्डारी , रुकुम
हाम्रा युवाहरु सुरुदेखि नै कुनै न कुनै पार्टीसँग सम्बlन्धत भएकाले विकास हुन नसकेको जस्तो लाग्छ । त्यही भएर अब आफैं केही गर्न पो थाल्ने हो की ?
दिपेश थापा, दैलेख
बाली थन्काउने बेला चुनाव भएका कारण खेतबारीमा काम गर्ने किसानले काम छोडेर नेताको आश्वासन सुन्नु परेको छ भने कतिले प्रचारमा जानु परेको छ । जति आश्वासन kfP पनि त्यो प"रा होला भन्ने छैन । झन् 7"nf दलहरुले विवादित विषयलाई सहमति गर्नुको सट्टा आआफ्नै अडान घोषणा पत्रमा राखेका छन् । कसरी बन्ला त संविधान ?
हुमाकान्त पोखरेल गुल्मि
पहिले सविधान सभा चुनावमा १३ वटा जिल्लामा धेरै मत वदर भए । अरु देशमा विद्युtLo d]lzgबाट भोट हाल्ने प्रविधी आइसक्दा हाम्रो देशमा भने अझै पनि कागजमा छाप लगाउने, पट्टाउने प्रविधी प्रयोग हुँदैछ । यस कारण पनि हाम्रोमा धेरै मत वदर भएको हो ।
उदय तिवारी पर्वत
जनार्दन ढकाल नेकपा एमाले
खमबहादुर गर्बुजा (खम्बीर) नेपाली कांग्रेस
विष्णुविक्रम थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी